FBS မှ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် အလွန်ထူးခြားတဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ပါပြီ။
FBS "စိတ်ကူးအိပ်မက်များ အမှန်တကယ်ဖြစ်လာပြီ" ပြိုင်ပွဲ၏ ဖေဖော်ဝါရီလ ဆုရှင် Banha (အီဂျစ်)အလယ် Al-Ailobia ပြည်နယ်မှ မစ္စတာSamir Ahmad Meshal ဟာ စစ်မှန်တဲ့အရောင်းအ၀ယ်စိတ်ဓာတ်၏ နမူနာကောင်းတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့စီးပွားရေးကိုအရှိန်မြှင့်ပြီး၊ မိတ်သစ်တွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်ရန် သူ့ဆိုင်အတွက် ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်/နဖူးစည်းစာတမ်း တစ်ခုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ သူ့ရဲ့ရင့်ကျက်တဲ့သဘောထားနှင့် အလကားရတာတွေကို ထိုင်စောင့်နေမည့်အစား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အလိုရှိသည့် ဆန္ဒကို ပြသတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
မစ္စတာSamir Ahmad Meshal သည် သူမျက်မှန်များရောင်းချရာ Al-Shariahပြည်နယ်၊ Mina Al-amh တွင် မျက်မှန်ဆိုင်လေးတစ်ခု ဖွင့်ထားပါတယ်။ FBSကို အစောထဲက အမှတ်မထင်သိခဲ့ပေမယ့် တစ်ခါမှ ရောင်းဝယ်ဖို့ မကြိုးစားခဲ့ဖူးဘူးလို့ ၀န်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဆိုင်ရဲ့ ဆိုင်းဘုတ်အဟောင်းက သိပ်ပြီး အထင်ကြီးစရာမကောင်းလို့ "စိတ်ကူးအိပ်မက်များ အမှန်တကယ်ဖြစ်လာပြီ" ပြိုင်ပွဲ​တွေ့တဲ့အခါ နဖူးစည်းစာတမ်းအသစ်တစ်ခုက သူ့အတွေးထဲ ပထမဆုံးရောက်လာတဲ့ အရာပါပဲ။
"အနိုင်ရပြီးတဲ့နောက်မှာ "ခင်ဗျားဘာလို့အိမ်တစ်လုံး ဒါမှမဟုတ် ကားတစ်စီးမတောင်းခဲ့တာလဲ?"လို့အမေးခံခဲ့ရပြီး၊ ကျွန်တော်ဖြေခဲ့တာကတော့ ကျွန်တော်စိတ်ကူးအိပ်မက်က ကြော်ငြာစာတမ်းတစ်ခုရှိဖို့ပဲ...အလုပ်အတွက်ဒါကို လိုအပ်တယ်လေ။ ဒါကျွန်တော်အတွေးပဲလို့" အနိုင်ရသူမှ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ စိတ်ဓာတ်ပဲ! ဆိုင်းဘုတ်/ကြော်ငြာစာတမ်းလို ရိုးရှင်းတဲ့အရာလေးက ကြီးမားတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုကို ဖြစ်စေပြီး၊ မိတ်သစ်များကို ဆောင်ကျဉ်းပေးကာ ရောင်းအားနှင့် ၀င်ငွေကို တိုးစေနိုင်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့သဘောတူပါတယ်။
"Forexနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘာအတွေ့အကြုံမှမရှိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဒီအကြောင်းကို ပိုလေ့လာချင်ခဲ့မိပါတယ်။ ၎င်း၏ယုံကြည်ထိုက်မှုကြောင့် အနာဂတ်မှာ FBSနှင့်အတူ လက်တွဲလုပ်ချင်မိပါတယ်"လို့ မစ္စတာMeshal ကပြောခဲ့တယ်။ ကောင်းပြီ။ ဒီလိုချဉ်းကပ်မှုမျိုးနဲ့ဆို သူဟာခဏလေးအတွင်း ဈေးကွက်မှာ အောင်မြင်မယ်ဆိုတာ ယုံမှားသံသယဖြစ်ဖွယ် မရှိပါဘူး။